Izindawo ezingama-30 ezihamba phambili ezihlanganisa wonke umuntu nezamaSki e-United States Zezithandani
By UVictoria Akpan TMLT September 16, 2021 Family, Indlela yokuphila, Izikhangibavakashi 0 Amazwana
- Izindawo zokungcebeleka eziseduze kwakho -
Ufuna uhambo oluzokusiza ukonga imali ngenkathi likuvumela ukuthi uphumule futhi uzijabulise? Ezindaweni zokungcebeleka ezihlanganisa wonke umuntu waseMelika, ungakwenza lokho, nokunye okuningi.
Lezi zindawo zokulala eziphelele zinikeza izivakashi konke kusuka emakamelweni amahle asemakethe kuya ekudleni okunempilo kwasepulazini kuya etafuleni kuya emisebenzini eqondiswayo ofuna ukuyenza, kaninginingi, ukuyenza ilungele imindeni, imibhangqwana, noma ibalula bezama ukuthuthukisa impilo yabo.
Ukukhethwa kwethu kufaka noma yini kusuka kuma-premium, izindawo zokungcebeleka zokunethezeka ngazo zonke iziqu zokuya ezindaweni zokuhlala ezengeziwe zama-log cabins futhi amabhizinisi esitayela sokulala nesidlo sasekuseni.
Izinto Zamahhala Ongazenza eTucson
Izinto zamahhala ongazenza eFresno
Izinto Ongazenza KuMesa
Mahhala Izinto Okufanele Uzenze eSacramento
Izinto Zamahhala Ongazenza ENashville
Ohlwini lwethu, uzothola izindlu ezisogwini, ukuhlehla kwezintaba, kanye nama-ranch amahle.
Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ezihlanganisa wonke umuntu e-United States
Izindawo zokungcebeleka ezibandakanya bonke abantu e-United States zehlukene njengezindawo ezibukeka kahle ezweni, kusukela ezindaweni zokungcebeleka ezishisayo ezinamanani ahlanganisa konke kuya emafundeni ase-rustic, amahhotela e-Victorian, nezindawo zokulala ezintabeni.
Okulandelayo uhlu lwezindawo zokungcebeleka eziyishumi e-United States okungukuthi konke okubandakanya noma ukuhlinzeka ngamaphakeji akhethekile namaphromoshini aqukethe izinto eziningi ezitholakala ezindaweni zokungcebeleka ezibandakanya bonke abantu.
1. AmaBungalows Key Largo eKey Largo, eFlorida
Indawo yokugcina yezothando ikule ndawo yabantu abadala kuphela indawo ebandakanya bonke abantu eFlorida. I-veranda yangasese enebhavu yokucwilisa, i-smart-screen smart TV, nombhede onethezekile onamatilasi womcamelo konke kufakiwe kwi-bungalow ngayinye evulekile.
Thatha ikilasi le-yoga olwandle, untanta ethekwini esikebheni sangasese se-tiki, noma udle kwenye yezindawo zokudlela eziyisithupha ezisendaweni.
Amabhayisikili ayatholakala ukuze asetshenziswe izivakashi, kanye nezifundo zeqembu le-yoga zansuku zonke, amachibi ahlukahlukene kanye neJacuzzis, kanye ne-spa esesizeni (izindleko zokwelashwa zingeziwe).
2. I-Vista Verde Guest Ranch eClark, eColorado
Izivakashi at I-Vista Verde Guest Ranch Ungaphila impilo yasemakhaya ngenkathi usajabulela ukunethezeka okumangazayo nokonakele. Leli pulazi lomlando alinawo amafoni, ama-TV, noma i-inthanethi emakamelweni ezivakashi, okuvumela izivakashi ukuthi zinqamule.
Idamu lokubhukuda, indawo yokuphumula yomphakathi enokubukwa kwe-panoramic, indawo yokuzivocavoca umzimba, inkundla yokugibela yasendlini, kanye nesigaba sezingane esinenkambo yezintambo kuphakathi kwezinto ezitholakalayo.
3. IWoodloch Pines Resort eHawley, ePennsylvania
Le ndawo yokuphumula yomndeni ibingelela izivakashi ngokumukelwa okufudumele nobungane namathuba amaningi okuba nobumnandi obudala, obudala ndawonye.
Le ndawo yokuvakasha yaziwa kakhulu ngohlelo lwayo lwemisebenzi ebanzi, olubhekela izintshisekelo ezahlukahlukene.
Inkundla yokudlala igalofu kanye ne-spa esezingeni lomhlaba iyatholakala naseWoodloch Pine Resort.
Amachibi okubhukuda angaphakathi nangaphandle, izindonga ezikhuphukayo zamadwala, i-kayaking, ukuqhwalela eqhweni, nokuzijabulisa ebusuku ziphakathi kwezinsiza ezitholakalayo.
4. Indawo yokuhlala esiQhingini iLittle St. Simons, eGeorgia
Okubandakanya konke Lodge eLittle Saint Simons Island resort ilungele labo abafuna ukuzola, ukuhlala bodwa nobuhle bemvelo.
Inamhlaba ongaphezu kwamahektare ayi-11,000 namabhishi angaphezulu kwamamayela ayisikhombisa, kepha abantu abangama-32 kuphela abavunyelwe ukuhlala nganoma yisiphi isikhathi. Le yi indawo ekahle yabantu abafuna ukushesha kancane, ngokuphathwa okwenzelwe wena esimweni esimnandi.
Ukudla okulungiselelwe esizeni ngumpheki, ukuthuthwa kwezikebhe ukuya nokubuya esiqhingini, kanye nohambo oluholwa nsuku zonke lwezemvelo konke kuyatholakala.
5. IClub Med Sandpiper Bay ePort St. Lucie, eFlorida
Le ndawo yokubungaza, eyaziwa njengenye yezindawo zokungcebeleka ezibandakanya bonke abantu e-United States yemindeni esebenzayo, inikeza konke okuncane.
IClub Med Sandpiper Bay, njengezinye izindawo zokungcebeleka ezibandakanya wonke amaCaribbean, ivumela izivakashi ukuthi ziphumule echibini, zibambe iqhaza emisebenzini yamanzi, futhi zidle futhi ziphuze ngokuthanda kwazo.
Izikhungo zezemidlalo ezinabafundisi abanolwazi, amakilabhu ezingane, namachibi angaphandle ziphakathi kwezinsiza.
6. I-White Stallion Ranch eTucson, e-Arizona
I-White Stallion Ranch iyindawo enhle kunazo zonke yokuhlala eholidini eletha ulwazi lwangempela lwamasiko asentshonalanga Melika.
Leli hhotela livame ukuchazwa njengesiphambano phakathi kwepulazi eliphansi nendawo yokuphumula ngoba linikeza izivakashi zalo amaphakheji afaka konke.
Izinsizakusebenza zibandakanya ichibi elifudumele kanye nobhavu oshisayo, indawo yokuzilibazisa, i-spa, ukuzijabulisa ebusuku ikhalenda lomsebenzi wezingane.
7. ISkytop Lodge eSkytop, ePennsylvania
The ISkytop Lodge, esenkabeni yezintaba iPoconos, ihambisa izivakashi esikhathini esidlule.
Lelodge yasendulo, eyakhelwe ngo-1928, inika izivakashi indawo ezungezile, indawo yokunethezeka kanye nokufinyelela endaweni engaphandle enolaka. Kunezinto eziningi okufanele zenziwe kule ndawo engamahektare angama-5,500 XNUMX.
Izinsiza ze-Spa, imisebenzi ye-adventure yangaphandle, kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kokudlela kuphakathi kwezinsiza.
8. I-Miraval Arizona Resort & Spa eTucson, e-Arizona
The IMiraval Arizona Resort & Spa yisiza sikandunankulu seholide lokuphila kahle, okushaya ibhalansi phakathi kokubukwa okuhle kwezintaba nokuphulukisa umoya wasogwadule.
Le ndawo yokubhuka ilungele abantu abadinga isikhathi sodwa, njengoba inikeza amanani entengo afaka konke kanye nokukhethwa kwezinsizakalo zokuvuselela i-spa.
Amasiko wokuvuselela umzimba, ukunakekelwa kwezinwele, ukunakekelwa kwesikhumba, nokwelashwa kwamandla konke kuyatholakala kule spa ewina umklomelo.
9. IKachemak Bay Wilderness Lodge, e-Alaska
Okubandakanya konke IKachemak Bay Wilderness Lodge's Imvelo yase-Alaska ingeyakudala, kepha amakamelo okunethezeka, ukudla okumnandi namaphakeji womsebenzi we-bespoke awahlukile.
Ukudla okumnandi, izindawo zokulala zikanokusho endaweni enhle, kanye nokuhlangenwe nakho kwemvelo okuqondiswa ngumuntu ngomunye nje wezinsiza ezitholakalayo.
10. Ihhotela Elikhulu esiQhingini saseMackinac, eMichigan
IGrand Hotel, echichimile egqumeni esiqhingini esinomlando iMackinac, lapho kungekho zimoto ezivunyelwe khona nezinqola ezidonswa ngamahhashi kuyindlela eyinhloko yokuhamba, ubuhle beqiniso baseMelika.
Kuyindawo enhle yokufihla indawo ebandakanya konke, egxile emlandweni nasekhaya kuveranda omude kunayo yonke emhlabeni.
Amagumbi aklanywe ngawodwana, ichibi langaphandle, umdanso wasebusuku, imidlalo yotshani, netiye lansuku zonke lantambama kuphakathi kwezinsiza.
Izindawo zokuhlala eziyishumi ezihamba phambili zezithandani e-United States
1. IHallmark Resort - eCannon Beach, e-Oregon
IHallmark Resort, engelinye lamahhotela athandana kakhulu ezweni, itholakala kolunye lwezingcezu ezinhle kakhulu zasogwini eNyakatho Oregon, olubheke eHaystack Rock yodumo.
Ikuvumela ukuthi uhambe ngokuzilibazisa ku- ulwandle olukhulu olugcwele amadola esihlabathi emanzini amancane, izinyawo nje ukusuka emnyango wakho.
Hlola amachibi asolwandle acwebile agcwele izimpilo zasolwandle ezimibalabala njenge-starfish ne-hermit crabs, bese ugcine umlindo wokuthuthela imikhomo empunga kusukela ngoNovemba kuya kuJanuwari futhi ngasekupheleni kukaMashi kuya kuJuni.
Ama-balcony anokubukwa kwePacific, kanye nezindawo zokubasa igesi kanye namathabhu e-spa abantu ababili, ayatholakala emakamelweni.
2. I-Auberge du Soleil - iNapa Valley, eCalifornia
INapa Valley iyi- indawo ethandwayo ye-honeymoon, kepha noma imuphi umbhangqwana ofuna ukuphunyuka kwezothando uzoyithanda, ikakhulukazi uma ehlala e-Auberge du Soleil.
Izindawo zokuhlala kule ndawo enhle, ebekwe phakathi kwe-oki neminqumo, enokubukwa okungenakuqhathaniswa kwezivini nezintaba zeMayacamas.
Kuyindawo eshisayo yemibhangqwana yokupheka, futhi kunjalo eyaziwa ngokudla kwayo kwezwe lewayini, sibonga iqiniso lokuthi yasungulwa indawo yokudlela yaseFrance enezinkanyezi.
Esizeni, kunesela lamabhodlela ayi-15,000, kanye ne-cafe nebha yokudlela okungajwayelekile nokugcotshwa kwama-to to the sunsets.
3. I-Tranquility Bay Beach House Resort - iMarathon, eFlorida
Kunzima ukudlula lesi Sikhungo Sokuvakasha semibhangqwana efuna ukunethezeka, ukuba wedwa nokubukwa kwe-panoramic kweGulf of Mexico.
KuMarathon Key, ingenye yezindawo zokungcebeleka eziphezulu eFlorida Keys, enikeza izindawo zokuhlala emakhaya asezindaweni ezishisayo zaseVictoria ezihlukaniswe ngezindawo ezinezitezi ezinamagumbi amabili namathathu okulala.
Konke kufaka ikhishi le-gourmet elihlome ngokuphelele, kanye neminyango yaseFrance kuwo womabili amazinga aholela emaphondweni avulekile ngokubuka okuhle kweGulf of Mexico.
Ibhishi elizimele elihle, imarina yangasese enohambo lokubuka izikebhe, ibha yolwandle yasolwandle, amachibi okubhukuda amathathu (umuntu oyedwa kuphela), kanye nokuqashwa kwemisebenzi yamanzi kuyatholakala ezivakashi.
4. I-Triple Creek Ranch - iDarby, eMontana
ITriple Creek Ranch, etholakala eDarby, eMontana, futhi izungezwe izintaba ezimangazayo zeBitterroot eMontana Rockies, ihlala ibalwa phakathi kwezindawo zokungcebeleka ezihamba phambili emhlabeni.
Iholide elibandakanya konke ehlane elibandakanya ukuhlala ubusuku obubodwa ezindlini zokungena zikanokusho nasemakhaya ezifuyo. Wonke amakamelo afaka indawo yokubasa umlilo yezinkuni nokufinyelela kubhavu oshisayo lapho ungaphumula khona ezinkanyezini.
Izintaba, ukugibela amahhashi, igalofu, kanye ne-dog sledding kungeminye nje yemisebenzi etholakala unyaka wonke. Ukudla okumnandi okulungiselelwe ngezithako ezintsha nezendawo kufakiwe.
5. IDunton Springs Resort - iDolores, eColorado
Edolobhaneni ledolobha lesipoki eligcinwe ngekhulu le-19 elinemithombo yalo eshisayo yamaminerali, iDunton Hot Springs inendawo enhle ehlane nezintaba zaseSan Juan njengesizinda sangemuva.
Indawo yokuphumula enezinkanyezi ezinhlanu iyindawo ekahle yokubalekela kukho konke bese uxhuma kabusha naleyo oyikhathalelayo.
Indandatho yamakamelo okuloba ama-antique isilungisiwe yaba yizindawo zokuphunyuka ezinhle ngezinto ezinjenge-spa emnandi, umtapo wezincwadi ogcwele kahle, kanye nebha.
6. IHana-Maui Resort - iMaui, eHawaii
IHana-Maui Resort, ebheke iHana Bay ngasogwini olukude lolwandle lwaseMaui, ivame ukukhonjwa njengenye yezindawo zokungcebeleka zothando emhlabeni.
Lindela insizakalo evelele, a i-spa esezingeni lomhlaba, i-cuisine enhle kakhulu, kanye nemisebenzi eminingi ehlukahlukene. Ngaphandle kwamathelevishini noma amawashi e-alamu, amakamelo makhulu ngokwedlulele futhi enzelwe ukuhlinzeka ukuthula okuphelele.
7. ILittle Palm Island Resort & Spa - iLittle Torch Key, eFlorida
Fika eLittle Palm Island Resort & Spa ngendiza yasolwandle noma ngesikebhe ukuze ubalekele abathandi bezothando, futhi uphumule endaweni yokulala noma uthathe uhambo olwandle lolwandle olumhlophe.
Kunezinhlanzi eziningi zasolwandle ezintsha ezimnandi, kepha awekho ama-TV, amawashi we-alamu, noma izingcingo, futhi okuwukuphela komgwaqo ama-iguana azulazula ngasendleleni egobolondo egayiwe.
Iqukethe i-Champagne ebandayo ekulindile lapho ufika, kanye nezixhobo zamakhorali ezicacile nje izinyathelo zokuhamba nge-snorkeling ezweni elibabazekayo elingaphansi kwamanzi nezinhlanzi ezingaphandle.
8. Enchantment Resort - eSedona, e-Arizona
Indawo Yokulala Enchantment ilungele imibhangqwana efuna ukuphumula, ukukhulula ukucindezeleka okungabuye kuthuthukise impilo yabo iyonke.
UBoynton Canyon, owaziwa nge ukuthola amandla amahle okuphulukisa, lizungezwe ngamatshe abomvu ahlukile kaSedona.
Iphinde ibe ne-Mii Amo, i-spa eyaziwa umhlaba wonke enikeza amaklayenti izinzuzo ezihlukile njengezindlela zokwelashwa eziphefumulelwe ukuhlakanipha namasiko aseMelika Omdabu.
Izitezi ezizimele, ukubukwa okumangazayo, nezindawo zomlilo zegesi zezinyosi konke kuyatholakala emakamelweni nakuma-suites, abekwe ezindlini ezinesitayela se-pueblo.
Ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukuhamba izintaba, ukubhukuda, igalofu, ama-workshops okupheka, i-yoga, ukuzindla, neminye imisebenzi konke kuyatholakala.
9. ICliff House - eCape Neddick, eMaine
ICliff House yindawo eyaziwa ngeMaine eheha izithandani ezifuna ezothando. Kube semukela izivakashi cishe iminyaka eyi-150 futhi izungeza i-Atlantic, inikela ngemibono yolwandle ebabazekayo kanye ne-spa enezindlela zokwelapha ezinhle zokubhucungwa.
Kunezindawo zokudlela eziningana lapho ungasampula ngokumangalisayo esifundeni, ukudla kwasolwandle okusha, kanye nemisebenzi ehlukahlukene yokuzilibazisa efana nolwandle kayaking.
Amachibi amathathu, i-labyrinth yokuzindla yangaphandle, izinhlelo zokuqina, nezindawo zokuhlala abantu abadala kuphela ezinezindawo zokubasa igesi kanye namabhalkhoni azimele ziphakathi kwezinsiza.
10. IBrush Creek Ranch - iSaratoga, Wyoming
Ibhulashi leRush Creek kuhle kakhulu ekubalekeni kwezothando okubili. Jabulela ukuthandwa yiWild West kanye nemisebenzi ehlukahlukene unyaka wonke epulazini lethu likanokusho lezivakashi.
Ukushushuluza eqhweni, ukushibilika eqhweni, ukuhamba ngeqhwa nokushayelwa eqhweni konke kuyatholakala ebusika.
Phakathi nezinyanga ezifudumele, thatha ihhashi ohamba ngalo emizileni engu-50 yamamayela, funda ukundiza izinhlanzi, ukuzivocavoca nge-yoga, bese uphumule ngokwelashwa kwe-spa.
Futhi kufakwe ukudla okumnandi. Uzoba nethuba lokuqasha yonke impahla noma enye yezindlu ezinhle kakhulu zamakamelo uma "Uqasha Umuzi."
Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ze-Ski e-US
1. I-Stowe Mountain Resort: IStowe, eVermont
IStowe Mountain Resort enyakatho yeVermont iphupho lomshwibi, ngamahektare angama-485 okushibilika kuwo, imizila engu-116, namakheshi ayi-12 amukela izivakashi ezimagange kule mihlangano.
IMount Mansfield neSpruce Peak, exhunywe kalula yi-gondola, iyingxenye yendawo yokuvakasha. Indawo yokubhuka ihlanganisa ukuhlanganiswa okuhle kwemizila yokuqala neyethuthukile, kepha-ke, ihloselwe abagibeli bamabhayisikili abaphakathi naphakathi.
Abashushuluzi besazi bangahlola amakhono abo kummango omningi wepaki yezwe, ukweqa, kanye nojantshi. Uma ungafuni ukubhekana nemithambeka ekwehleni, indawo yokubhuka ihlinzeka nokushushuluza kwezwe eliwela izwe. I-Lodge e-Spruce Peak yindawo yokuhlala uma ushelela e-Stowe Mountain Resort.
I-lodge iwukuphela kwendawo yokunethezeka eSowe evumela ukungena nge-ski-in, ukufinyelela ngaphandle, futhi inikeza ukufinyelela okulula kuyo yonke imikhondo. Phuma e-spa esesizeni ngemuva kosuku olude entabeni.
Ngemuva kwalokho, kwelinye lamagumbi ezihambeli zakudala, ama-suites, noma ama-penthouses, phumulela imisebenzi yosuku olulandelayo; futhi ungabekisa ikhabethe eliqashisayo kanokusho elihlonyiswe ngompheki wangasese nensiza yomuntu siqu yomphathizitsha.
2. IKillington Ski Resort: Killington, Vermont
IKillington Ski Resort inemizila engaphezu kwama-200 esatshalaliswa eziqongweni eziyisikhombisa enkabeni yeVermont, ngakho-ke ungashushuluza izinsuku eziningi futhi ungakhathali. Isibalo esikhulu semizila siqinisekisa ukuthi abagibeli bokushibilika eqhweni nabashibilika eqhweni kuwo wonke amakhono bazothola okuthile abakuthandayo.
Intaba, ngakolunye uhlangothi, ibhekela kakhulu abagibeli bamabhayisikili abaphakathi nabanolwazi kunabaqalayo. IDeveli's Fiddle, Outer Limits, neCascade konke kungukugijima okuyokushiya uphefumulela phezulu.
Ngaphezu kwalokho, ipaki yendawo yokuvakasha inikeza isikhala esanele se-freestyle ne-trick practice. I-Killington Grand Resort Hotel iyindawo enhle yokuhlala ngoba ikuvumela ukuthi ushibilike ungene futhi uphume entabeni ngebhuloho elimbozwe yiqhwa.
Ichibi elifudumele, izindawo zokubhukuda ezishisayo, izindawo zokudlela, igumbi lezemidlalo, neklabhu yezempilo konke kunconywe izivakashi zangaphambilini. Ukungasho, ukuvakashela eKillington Grand Spa ngemuva kosuku emithambekeni kuyindlela enhle yokuphumula imisipha eqinile.
3. IBretton Woods: IBretton Woods, iNew Hampshire
I-Bretton Woods yindawo enkulu kunazo zonke yokushushuluza e-New Hampshire, enezinsizakalo eziningi zokwenza iholide lakho le-ski libe yimpumelelo. Indawo yokubhukha inamakheshi ayishumi asebenzisa imizila engama-98 nama-glades, kanye nokuwa kweqhwa minyaka yonke okungaphezu kwama-intshi angama-200.
Ngaphandle kwemithambeka, kukhona nobumnandi obuningi ongabuthola. Ukushushuluza kweNordic noma ukubamba iqhwa kuyimisebenzi emibili yasebusika engakhathazi kangako.
Okwamanje, indawo yokuthambisa, ipaki yezingane ehamba ngeqhwa, kanye nohambo lwamabhayisikili asebusika kunikeza ukuzijabulisa komndeni okuningi.
4. ISugarloaf: ICarrabassett Valley, eMaine
ISugarloaf ingesinye sezindawo zokungcebeleka ezishushuluza eNew England, ezinamahektare ayi-1,240 endawo yokushibilika kanye nokwehla okuma mpo ngamamitha angu-2,820. Imizila engu-162 nama-glades ahlinzeka ngawo wonke amazinga abashushuluzi, ngama-run asukela kokulula kuya kongoti kuphela.
Futhi, ngamakheshi e-ski ayi-13, uzokwazi ukusebenzisa isikhathi esiningi sokushushuluza kunokuba ulinde umugqa wokugibela uye phezulu. Noma kunjalo, imisebenzi evusa amadlingozi ayigcini lapho.
Ukushushuluza unqamule izwe, ukugoba inja, ukuhamba ngebhayisikili okunamafutha phezu kweqhwa, nokushibilika eqhweni konke kungakhetha kulabo abavakashela eSugarloaf.
Kunezindawo zokudlela eziningi nezitolo endaweni esezintabeni ukuze uzijabulise.
Izivakashi zangaphambilini ziphakamisa ukumisa i-45 North ukuze uthole isidlo ngaphambi kokuya eSuarloaf Mountain Hotel, enebhavu enkulu eshisayo yangaphandle, indawo yokudlela esizeni, indawo yokubhuka evulekile eya endaweni yesikebhe, nokubukwa okuhle kwezintaba.
5. ICrystal Mountain: iThompsonville, eMichigan
Le Midis ski resort, etholakala ngamamayela angama-30 eningizimu-ntshonalanga yeTraverse City, ithola amamitha ayi-11 eqhwa ngonyaka, ukuqinisekisa izimo ezifanele.
Abashushuluzi bangangena emizileni engu-58 ngokusebenzisa izinketho zokuphakamisa eziyisishiyagalombili, ezinye zazo ezikhanyiselwe ukushushuluza ebusuku. Cishe uhhafu wemizila ulungele abagibeli bokushushuluza abaphakathi nendawo, kuyilapho ama-22% kungawabaqalayo kanti ama-30% angabashushuluzi abanolwazi.
Ama-ramps, amapayipi, ukuqaqa, nezinye izici kuyatholakala ezindaweni ezintathu zepaki yethrafikhi. Kulabo abafuna ukuhlala endaweni eyisicaba, ukushushuluza ngezwe lonke kuyindlela.
Izivakashi zizothola i-skating rink, isikhungo sendawo yokushisa eshisayo yangaphandle, ama-boutique, izitolo ze-pro, izindawo zokudlela kanye nezinketho ezahlukahlukene zamahhotela onyaweni lwentaba.
Uma uhamba nephathi enkulu, hlala eBungalows e-Crystal Den, e-Inn eNtabeni uma udinga ukuhlanganisa umsebenzi nokudlala, noma i-The Hamlet yamagumbi ezihambeli zakudala.
6. I-Whiteface Mountain Resort: eWilmington, eNew York
Ngeke uthole kuphela intaba ye-ski esimeme e- I-Whiteface Mountain Resort, kodwa futhi uzothola ukwehla okume mpo okukhulu empumalanga yamaRockies.
Esinye sezifundo ezinde kunazo zonke eziphakathi nendawo eNyakatho-mpumalanga, kanye "nama-slides," okuyizinto empeleni eziwumqansa, amaconsi afana ne-chute anenkinga yedayimane emnyama kabili, ziphakathi kwezici ezihlukile zalesi sihambi.
Abashushuluza futhi bangavakashela amapaki ezindawo ezisemgwaqeni ngenhloso yokujaha i-adrenaline okungathusi kangako. Noma ufika eWhiteface njengomuntu oshibilika eqhweni onovalo, esinye sezifundo eziningi ezizimele noma zeqembu ezitholakalayo singakusiza ukuthi uzethembe emizileni.
Ngemuva kokuthi uqede ukugawula, zinike isikhathi sokubuka izinto zama-Olimpiki kule ndawo yezintaba, eyayibambe ama-Olimpiki asebusika ngo-1980.
Ngemuva kwalokho, ukuthola indawo enhle yomndeni enezici ezinjengechibi lasendlini kanye ne-ice rink, hlala eThe Golden Arrow Lakeside Resort noma eHotel North Woods, zombili eziseduze nedolobha iLake Placid.
7. I-Wintergreen Resort: eNellysford, eVirginia
Ubusika eNingizimu abunazo izindawo zokungcebeleka ezishibilika eqhweni, naseVirginia Indawo yokuhlala i-Wintergreen ingenye enkulu kakhulu. Amakheshi amabili eholide ahlinzeka ukufinyelela emizileni engu-26 yamazinga ahlukahlukene obunzima.
Kunemithambeka emaphakathi engashintshi lapho ungangena khona lapho ubukeka khona, kanye namathrekhi ochwepheshe anyantisayo athatha abashushuluzi baye ngqo entabeni.
I-Ridgely's Fun Park, isigaba esithile sezingane, kanye nepaki yendawo yokwenza ubuqili be-ski ojikeleza iminikelo yentaba. E-Wintergreen, izivakashi nazo zingabhalisela izifundo zeqembu noma ezizimele ze-skiing.
Le ndawo yokubhalela yenzelwa ukungabi bungako bayo ngosayizi womsebenzi uma iqhathaniswa nokulingana kwayo kwasentshonalanga. Uma usugcwalise ukushushuluza, zama ipaki enkulu yokubhukuda yombuso, ungene echibini elingaphakathi endlini, noma uzitotobise eWintergreen Spa.
Indawo yokungcebeleka inikeza izindlela zokulala ezahlukahlukene, kusuka emakamelweni endabuko ehhotela eMountain Inn kuya emakhondomu nasezindlini.
Uzoba nokubukwa kwezintaba zeBlue Ridge kungakhathalekile ukuthi ukhetha yiphi indawo yokuhlala.
8. Indawo yokuvakasha i-Timberline Four Seasons: Davis, West Virginia
The Indawo yokuhlala i-Timberline Four Seasons inikeza izindlela eziningi ezahlukahlukene, ezisukela ezindleleni eziqala ukusebenziseka kuze kube sekugijimeni okuphindwe kabili kwedayimane elimnyama.
Indlela emaphakathi yeTwister ivumela abashushuluzi ukuba baphelele ekujikeni kwabo, kuyilapho umzila onobuqalayo we-Upper Salamander uvumela abaqalayo ukwehla esiqongweni sentaba.
Ngaphezu kwalokho, amapaki amabili endawo ahlinzeka ngamathuba amaningi kubashushuluzi nabashibilika eqhweni ukuba bazijwayeze ukwenza izinto ngobuqili namasu. Izimpukane ezincane namabhokisi amancane ayatholakala e-Snow Squall Terrain Park kulabo abafuna ukungena kalula kuma-freestyle stunts nokunye okunjalo.
Uma usulungile, iya e-Thunder Snow Terrain Park ukuthola izici eziyinselele nojantshi. Ungabhalisela ukusebenza nomuntu ngamunye nothisha oqeqeshiwe noma ukhethe isifundo seqembu, noma ngabe kungokokuqala ngqa emithambekeni noma ufuna ezinye izikhombisi ezingeziwe ukuze uthuthukise ukugijima kwakho.
Indawo enkulu yokulala inezinhlobonhlobo zokudla neziphuzo ongakhetha kuzo ukugcwalisa isifiso sakho sokushushuluza, kodwa izivakashi ziyathanda nokuvakashela izindawo zokudlela ezinyaweni zentaba.
Ihhotela i-Timberline linikeza ukufinyelela okulula kwe-ski-in / ski-out ku-resort, kanti amanye ama-motels nezindawo zokudla nezindawo zokulala ezindaweni eziseduze nazo zisondele entabeni.
9. ICrystal Mountain Resort: ePierce County, eWashington
Le ndawo yokuvakasha, etholakala ngaphandle nje kweNtaba iRainier National Park, ingenye yezindawo ezingcono kakhulu zokushushuluza e-Washington. Izivakashi zingangena emizileni engu-57 egunyaziwe ngamakheshi ayishumi nanye, ngaphezulu kwengxenye yazo kube ukugijima okuphakathi naphakathi.
Okunye kuhlukaniswe ngamathambeka okuqala nawongoti, wonke athola cishe iqhwa elingama-intshi angama-500 unyaka nonyaka. Cishe ngamamitha angu-7,000 ngaphezu kogu lolwandle, i-Summit House Restaurant iletha ukudla okumnandi kubantu abashibilika eqhweni.
ICampbell Basin Lodge isebenza ngemali yokugibela maphakathi nezintaba, kanye nobubanzi bezinye izindlela zokudlela ezengeziwe eduze kwesisekelo.
I-Alpine Inn, iThe Village Inn, kanye neQuicksilver Lodge yizindlela ezintathu zokuhlala ezikahle esisekelweni sabahloli abakhathele.
Lawa mahhotela ayahlukahluka ngesitayela, kepha onke ahlinzeka ngezinsiza ezilula ezifana ne-Wi-Fi yamahhala nokutholakala kokuphakamisa ukushushuluza eqhweni. I- ICrystal Mountain Resort itholakala cishe emakhilomitheni angama-80 eningizimu-mpumalanga yeSeattle.
10. IBreckenridge Ski Resort: IBreckenridge, eColorado
Uma usufikile eBreckenridge, usuvele ufike kwenye yezindawo eziphezulu zokushushuluza ezweni, futhi izinsiza eziseBreckenridge Ski Resort zizokusiza ukuthi ukusebenzise kahle ukuhlala kwakho.
Le ndawo enkulu yokushibilika eqhweni (cishe amamayela angama-60 eningizimu-ntshonalanga yeDenver) iyindlela ecela ukuthi ihlolisiswe: ingqungquthela yentaba iphakama ibe ngamamitha ayi-12,998 187, futhi kunezindlela eziyi-34 ezisetshenziswa ngamakheshi angama-XNUMX okushushuluza eqhweni.
Ungasebenza kumakhono akho kwenye yamapaki ezindawo zokuvakasha noma uzame isandla sakho ezindleleni eziphakeme zezintaba ezihlukile kule ndawo. Sekuyisikhathi sokushaya idolobha ngemuva kokusebenzisa isifiso emithambekeni.
Izitolo, amathilomu, iminyuziyamu, kanye nezindawo zokuphuza utshwala kugcwele esifundeni esidala sasedolobheni, kuguqula uhambo lwakho lokushushuluza lube ulwazi olunzulu ngamasiko.
Abashushuluzi abakhathele bangaphumuza amakhanda abo kwenye yezindawo zamahhotela ezihamba phambili, njengeCrystal Peak Lodge ne-One Ski Hill Place. I-ski valet, amathikithi wokuphakamisa ngaphakathi, nendawo enhle enokufinyelela okusheshayo entabeni konke kufakiwe nokuhlala ehhotela elivelele.
Siyethemba ukuthi uyithande le ndatshana ezindaweni zokungcebeleka eziseduze kwakho nokuthi ikusize kakhulu.
Uma unemibuzo noma iziphakamiso mayelana nezindawo zokungcebeleka eziningi eziseduze kwakho, sicela wenze kahle ngokushiya amazwana futhi wabelane ngendaba yakho nabangani bakho.
Tags:izindawo zokungcebeleka ezibandakanya konke ebhishi eFlorida, izindawo zokungcebeleka ezibandakanya wonke amabhishi e-usa, izindawo zokungcebeleka ezibandakanya wonke umuntu e-usa, izindawo zokungcebeleka ezibandakanya konke e-usa zemibhangqwana, izindawo zokungcebeleka ezibandakanya konke eduze kwami, izindawo zokungcebeleka ezibandakanya konke, izindawo zokungcebeleka ezingcono kakhulu usa for imibhangqwana, izindawo zokungcebeleka ezihamba phambili e-usa
I-Indiana EBT Card Balance: Izinyathelo Zokubona i-Indiana EBT Card Balance yakho
Uhlu Lwemephu Oluphelele nolunembile Lwamakhodi Wendawo yaseNew York
Izindawo ezihamba phambili ze-Honeymoon zokuvakashela ngemuva komshado wakho e-USA
UVictoria Akpan TMLT
UVictoria Akpan uneziqu ze-bachelor ku-Communication Arts azithola e-University of Uyo, e-Uyo, eNigeria. Ungumdali wokuqukethwe okuzimele nowebhulogi ozimele.